Pebble အချိန်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - သတင်း Rule
အဆိုပါ Pebble အချိန်စမတ်နာရီ၏ Casio ကဲ့သို့ဖြစ်၏: ရိုးရှင်းပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူ, အလွန်ကောင်းစွာအမှုအရာ၏စုံတွဲတစ်တွဲမ, အရာအားလုံးလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းမရှိဘဲ.
အမည်ပေးထားသောဤဆောင်းပါး “Pebble အချိန်ပြန်လည်သုံးသပ်: Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့မှရိုးရှင်းသောပေမယ်ထိရောက်သောအဖြေ” ရှမွေလသည် Gibbs ကရေးသားခဲ့, theguardian.com ကြာသပတေးနေ့ 28 မေလအပေါ်များအတွက် 2015 05.00 ကမ္ဘာတစ်လွှားကိုသြဒိနိတ်အချိန်
Pebble အချိန်နောက်ဆုံးပေါ်စမတ်နာရီပေမယ့အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်, ရိုက်ခြင်းဖြင့်ကျိုးပဲ့သောမှတ်တမ်းများရှိခြင်း $2မီတာအတွက် 58 မိနစ် နောက်ဆုံးမှာပြုစုပျိုးထောင် ပိုပြီးထက် $ 20 မီတာ. ဒါကြောင့်တစ်ဦးနှင့်တိုက်ရိုက် Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ပြိုင်ဘက်အောင် - - တန်ဖိုးရှိဖောင်းပွဒါပေမယ့် Android နှင့် iPhone ကိုနှစ်ဦးစလုံးနဲ့အလုပ်လုပ်သောလက်ပတ်နာရီသည်?
ဒီ Pebble များအတွက်စိတ်ရွှင်လန်းသွားဘက်စုံရက်နေ့တွင်ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်. သူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံး Cross-platform ကိုစမတ်နာရီ, ရိုးရှင်းစွာအ Pebble ကိုခေါ်, အတွက် Kickstarter ကမှတ်တမ်းများကိုဖဲ့ 2012 နှင့်စမတ်နာရီစက်မှုလုပ်ငန်းဆက်လက်ပေါ်ထွက်လျှက်.
နှင့်အပေါ်နှစ်ဦးမော်ဒယ်များ, ကိုရောင်းချ 1 မိနစ်ယူနစ်ပြီးနောက်, ထိုအချိန်ကအလွန်ကောင်းစွာအနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်အပေါ်နိုင်ပါသည်တစ်ဦးပိုမိုခေတ်မီစမတ်နာရီနှင့်အလွန်အကျွံလုပ်ဖို့မကြိုးစားပါဘူး.
အဆိုပါ Pebble အချိန်, အများဆုံးစမတ်နာရီနဲ့မတူပဲ, အိုင်ဖုန်းသို့မဟုတ် Android တစ်ခုခုကိုနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်. ဤသုံးသပ်ချက်ကိုငါတို့သည်တစ်ဦးက iPhone နှင့်အတူ၎င်း၏အသုံးပြုမှုအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မယ်. တစ်ဦးကနောက်ပိုင်းတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ကို Android နဲ့အလုပ်လုပ်ခြားနားချက်များမှာကြည့်ရှုမည်.
အဆိုပါအချိန်တစ်စမတ်နာရီများအတွက်အတော်လေးအသေးစားနှင့်သိမ်မွေ့သည်, တစ်သံမဏိ bezel နှင့်ပလတ်စတစ်ကိုယ်ထည်နှင့်အတူ, ဒီနေရာမှာတစ်ဦး optional ကိုသားရေသိုင်းကြိုးနှင့်အတူ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
ရရှိနိုင်တဲ့တခြားစမတ်နာရီနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, မူရင်း Pebble နှင့် Pebble သံမဏိအပါအဝင်, ငါအချိန်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်ခဲ့ရုံဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့အားဖြင့်လုပ်ကြံခံခဲ့ရ.
ဒါဟာ 9.5mm အထူင်, လက်ကောက်ဝတ်မှကွေး, နှင့်တစ်ဦးစံကိုအသုံးပြုသည်, အသုံးပြုသူ-အစားထိုး 22mm-ကျယ်ပြန့်လက်ပတ်နာရီလက်ပတ်. တစ်ဦးအဆင်ပြေဆီလီကွန်ရော်ဘာသိုင်းကြိုးနှင့်အတူအချိန်သင်္ဘောများ. အ lugs အပါအဝင် 47mm - - ထိုသေးငယ်တဲ့ Casio ၏အရွယ်အစားနှင့် 42mm Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ထက်အနည်းငယ်ပိုမိုပါးလွှာခြင်းနှင့်သေးငယ်တဲ့အကြောင်းကသောအမှု 37.5mm အားဖြင့် 40.5mm ဖြစ်ပါသည်.
အဆိုပါအချိန်လည်းရေစိုခံသည်, ကိုယ့်မှာသုတျယဉ်မဟုတ်. ဒါဟာ 50 နက်ရှိုင်းရန်ခရီးစဉ်ရှင်သန်နိုင်, ၎င်း၏မိုက်ခရိုဖုန်းမှသာ 30 မှရှင်သန်နိုင်ပေမဲ့. အခြေခံအားဖြင့်တော့, ကတော်တော်လေးတာဘာမှရှင်သန်လိမ့်မည်, ရေကူးအပါအဝင်.
အဆိုပါ 1.25in မျက်နှာပြင်ကအမြဲ-on ရဲ့အသစ်တစ်ခုအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်, အရောင် E-စက္ကူ ပြသ. Kindle နှင့်အခြား E-စာဖတ်သူတွေအပေါ် e-ink display တွေလိုပဲ, ဒါကြောင့်တိုက်ရိုက်အလငျး၌လွယ်ကူစွာဖတ်ရနိုင်, ဒါပေမယ့်လည်းလှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် activated တစ်နောက်ခံအလင်းရှိပါတယ်, သို့မဟုတ်တစ်ခလုတ်ကိုသင်မှောင်မိုက်၌ကင်းစောင့်ဖတ်ရန်လိုအပ်ပါတယ်သငျ့သ​​ညျ.
ယခင် Pebbles မတူဘဲ, မျက်နှာပြင်ချောမွေ့ animations တွေကိုကိုင်တွယ်ထိန်းသိမ်းနိုင်နှင့်အခြားစမတ်နာရီမှာအသုံးပွုတဲ့ LCD ကိုသို့မဟုတ်အိုအယ်လ်အီးဒီဖန်သားပြင်ကဲ့သို့ slick သို့မဟုတ်အဖြစ်တောက်ပမကြည့်ပါဘူးစဉ်, ကလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ပေါ်သည်နှင့်ဘက်ထရီမသတ်ပါဘူး.
ငါ e-စက္ကူနည်းပညာကိုရောက်လာပြီပဲဘယ်လောက်ဝေးနေဖြင့်အလွန်သဘောကျခဲ့သည်. ဒါဟာယခင်အဖြူအနက်ရောင်-and Pebble စမတ်နာရီကျော်ရှေ့ဆက်ကြီးမားတဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်.
တွဲဖက်မှုနဲ့ setup process ကိုမိနစ်အနည်းငယ်ကြာ. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pebble Bluetooth မှတဆင့်တစ်ဦးကို iPhone ချိတ်ဆက်ပြီး, အမှုအရာအလုပ်လုပ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ Pebble က iOS app ကိုလိုအပ်နေ.
တည်နေရာဝင်ရောက်ဖို့ခွင့်ပြုချက်တောင်းအပါအဝင် - ဒီ app ဆက်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့် setting များကိုလမ်းညွှန်အသုံးပြုသူများကိုထိန်းချုပ်, အသိပေးချက်များနှင့်ပြက္ခဒိန်သတင်းအချက်အလက်များ.
တူ့ရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါသည် - ပဲ iPhone ကိုပေါ်တွင် Bluetooth ကိုဖွင့်, app ကို access နှင့် Pebble ကို select လုပ်ပါ. တွဲဖက်မှုတောင်းဆိုချက်ကိုလက်ခံပါနှင့်မျက်နှာပြင်ညွန်ပြချက်များကိုလိုက်နာ. အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးထက်လျော့နည်းနှစ်မိနစ်ကိုယူ.
ခလုတ်စာရင်းနှင့်လွယ်ကူသောအကြောင်းကြားစာများမှတဆင့် scrolling လုပ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pebble အချိန်က touchscreen ရှိသည်ပါဘူး, အစားနှစ်ဖက်ပေါ်လေးခလုတ်အပေါ်မှီခို: တစ်ကျောခလုတ်ကိုကဲ့သို့လက်ဝဲဘက်လုပ်ရပ်များအပေါ်ခလုတ်ကို, လက်ျာဘက်၌ထ scrolling အဘို့နှင့်ချလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု button ကိုနှစ်ယောက်ခလုတ်ရှိပါတယ်.
တက် scrolling သို​​့မဟုတ်ဆင်း watchface မှသင်၏ပြက္ခဒိန် entries တွေကိုတဆင့် browses, လာမည့်နှစ်ရက်အားဖြင့် scroll မှနောက်ဆုံးတနေ့ entries တွေကိုတဆင့်ဆင်းကျောအဘို့ချီ.
နာရီမထံမှ, တစ်စက္ကန့်များအတွက်ကျင်းပသည့်အခါတက်ဆင်းခလုတ်လည်းတစ် app သို့မဟုတ်မျက်နှာပြင်ကိုဖွင်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်, ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်းကြားစာများရဲ့စာရင်းအဖြစ်, အ Misfit app သို့မဟုတ်ဂီတထိန်းချုပ်မှု.
အ Pebble မကီးဘုတ်ရှိပါတယ်, ကမိုက်ခရိုဖုန်းရှိတယ်စဉ်, တစ်ဦးကို iPhone နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အခါလက်ရှိစကားသံကိုပြန်ကြားထောကျပံ့ပေးမထားဘူး. (ဒါဟာ Android ပေါ်မှာမ, ငါမူကားတစ်ဦးအကြာတွင်ပြန်လည်သုံးသပ်အတွက်ဆွေးနွေးကြမည်။) Pebble ဒီမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်၌ပြောင်းလဲပစ်ရန်မျှော်လင့်.
အသိပေးချက်များလက်လှမ်းဖို့လွယ်ကူပါတယ်, တဆင့် scroll နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်း.
အသိပေးချက်များတစ်စမတ်နာရီရဲ့မုန့်နှင့်ထောပတ်များမှာ. အဆိုပါအချိန်ရိုးရှင်းတဲ့ကြာ, အသိပေးချက်များထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှု - သင်က iPhone ပေါ်မှာအကြောင်းကြားစာကိုပြသခွင့်ပြုထားပြီးတစုံတခုကိုမျှနာရီမှစလှေတျတျောဖြစ်ပါတယ်.
ဒါကြောင့်လာအတိုင်းလက်ပတ်နာရီအသီးအသီးအကြောင်းကြားစာတုန်ခါခြင်းနှင့်ပြသ, အီးမေးလ်များ၏သေးငယ်တဲ့အတိုအထွာပြသ, ကျမ်း, မှာ tweet များနှင့်အခြားသတိပေးချက်. ကပယ်ချသည်တိုင်အောင်နောက်ဆုံးသတိပေးချက် screen ပေါ်မှာအဲ့ဒီအချိန်မှာ, သောဗဟို button ကိုနှစ်ယောက်ပိုက်ခေါင်းကြာ.
လက်ရှိတွင်ဆိုင်းငံ့အကြောင်းကြားစာများအအကြောင်းကြားစာ menu ကို option ကိုတဆင့်တစ်ဦးစာရင်းထဲတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်အားလုံး, နှင့် Mass en ပယ်ချ, အ Pebble အပေါ်တစ်ဦးအကြောင်းကြားစာထှကျသှားစပွေီးပေမယ့်အိုင်ဖုန်းကနေထုတ်ပယ်မပါဘူး.
Music ကိုထိန်းချုပ်မှု display ကိုအယ်လ်ဘမ်အနုပညာ, volume ကို adjust, အပုဒ် skip နဲ့ခဏနားပြီးကျန်တာတွေကိုကစား.
အသိပေးချက်များကို ကျော်လွန်., ဂီတထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ကြ ပိုင်ဆိုင် key ကိုအကြောင်းပြချက် တစ်စမတ်နာရီ. Pebble ရဲ့စကွဝဠာဂီတဝေးလံခေါင်သီလက်ရှိတွင်ဖုန်းပေါ်မှာကစားယျဖျောပွသညျ, volume ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်, ခေတ္တရပ်ဆိုင်း, အပုဒ် play နှင့် skip. ဒါဟာအစာရှောင်င်, ထိရောက်သောနှင့် iOS ကိုတေးဂီတအက်ပ်နှင့်အတူကြီးမြတ်အလုပ်လုပ်တယ်, Spotify, Google Music နှင့်အများဆုံးကိုအခြားသူများ Play.
ထက်ပိုပြီးနှင့်အတူ 6,500 အသုံးပြုသူနှင့် developer များကဖန်တီး apps များ, နီးပါးတစုံတခုကိုမျှအဘို့အ app တစ်ခုရှိပါတယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
Pebble လည်းထက်ပိုပါတယ် 6,500 ၎င်း၏ app ကို store မှာ app များ, ပုံမှန်အားဖြင့်ကောင်းစွာတစ်ချက်လုပ်နေတာအပေါ်အာရုံစူးစိုက်. အထူးများကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေးစောင့်ကြည့်ရေးအတှကျ Misfit နှင့် Up ကိုပါဝင်, အိပ်ခြေရာခံခြင်းအပါအဝင်; ခြေရာခံခြင်းပြေးဘို့ Runkeeper နှင့် Runtastic; Evernote; အချို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်ရထားကြိမ် apps များ; စတုရန်းလေးထောင့ရဲ့ swarm; နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရွက်အဖြစ်အမှုအရာ apps များ၏အင်တာနက်, သောသိုက်အပူထိန်းကိရိယာကိုထိန်းချုပ်ရန်အသုံးပြုသည် - ထိုစာရင်းရှည်.
ဤအပလီကေးရှင်းအတော်များများ hobbiests ဖွငျ့နှင့်သန့်ရှင်းသောဖြစ်ကြ၏, ရိုးရှင်းသောနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်. လိုအပ်တဲ့အခါ, အချို့ဖုန်းပေါ်မှာအဖော် apps များရှိသည် - ထိုသူတို့အပေါငျးတို့သစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် Pebble app ကိုတဆင့်ရရှိနိုင်ပါ.
လွန်းကနေရှေးခယျြဖို့ watchfaces ၏တန်းတူအရေအတွက်ရှိပါတယ်. သူတို့ထဲကအတော်များများဟာအချိန်ကိုပြောပြထက်ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြ, ရာသီဥတုခြင်းအပါအဝင်, ကြံ့ခိုင်ရေးခြေရာခံခြင်း, နှင့် IoT ထုတ်ကုန်၏ status. သင်ပြုချင်ဘာမှမများအတွက် watchface တော်တော်လေးအများကြီးရှိပါတယ်.
ငါရှိအောင်နှစ်သက်တွေ့ရသောအများအပြားတွေ့ရှိရကြပြီမဟုတ်, သို့သော်ယခုအခါအရောင်က e-စက္ကူမျက်နှာပြင်ကိုပြောင်းလဲဖွယ်ရှိသည်မူရင်း Pebble အပေါ်ဟောင်းက e-မှင်ဖန်သားပြင်ကျော်ပိုပြီးဖန်တီးမှုအသုံးပြုမှုများအတွက်ခွင့်ပြု.
အခမဲ့ရရှိနိုင် watchfaces တစ်ဦးသူ၏စည်းစိမ် Pebble store မှာရှိပါတယ်, သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစတိုင် fit တကြိုးစားရှာတွေ့မှတဆင့်ကြည့်ရှုရကျိုးနပ်သော. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အများစုမှာစမတ်နာရီမရှိသလောက်တစ်ရက်ထက် ပို. ကြာရှည်, ထိုခြွင်းချက်အဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ Sony ကစမတ်နာရီ 3, သောငါ၏စမ်းသပ်ခြင်း၌သုံးရက်ကြာ. အဆိုပါ Pebble တာရှည်ကြာ.
တောင်မှလေးလံသောအသုံးပြုမှုနှင့်အတူ, အသိပေးချက်များရာပေါင်းများစွာနှင့်အတူ, အိပ်ခြေရာခံခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကစားအများကြီး, ထိုအချိန်ကာလကြာမြင့် 72 တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ်နာရီ.
နေ့ချင်းညချင်းကဝတ်ဆင်ခြင်းမရှိဘဲ, ကပတ်ပတ်လည်ငါးအလုပ်လုပ်ရက်ပတ်လုံးင်, နှင့်ဖွယ်ရှိတာရှည်သင်သည်အမြဲတစေအသုံးပြုနေလျှင်.
ဘက်ထရီကိုအောက်တွင်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် 5%, ဒါကြောင့်အခြေခံကို switch, အချိန်သာ mode နဲ့ကပြည်နယ်ခန့်တစ်ရက်ကြာ. တစ်ဦးကအပြည့်အဝတာဝန်ခံ cable ကိုအားသွင်းနေတဲ့သံလိုက်ကို USB သုံးပြီးနှစ်နာရီယူ, တစ်အိပ်ရာ-side table ကိုမှမဆန့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ရှည်သော.
အိုင်ဖုန်း၏ဘက်ထရီသက်တမ်းအပေါ်အချိန်ရဲ့သက်ရောက်မှု6Plus အားငါ့စမ်းသပ်ခြင်းအတွက်မှုမရှိခြင်းကိုခဲ့သည်နှင့်အတူအသုံးပြုခဲ့သည်. အဆိုပါ iPhone ရဲ့ဘက်ထရီကိုအသုံးပြုမှုမော်နီတာအ Pebble အချိန် app ကိုဖွင့်ကိုလောင်ကပြောပါတယ် 4% ဘက်ထရီ၏, Safari ကရဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် 19% နှင့်အိမ်နှင့် lockscreen ရဲ့ 16%.
အဆိုပါသံလိုက်အားသွင်း cable ကိုနာရီ၏နောက်ကျောအားအလေးထား, ဒါပေမဲ့အလွန်အားကြီးသောမဟုတ်ပါဘူး, ဒါဟာအတော်လေးအလွယ်တကူ detach လုပ်လိုက်သောနိုင်ပါတယ်အဓိပ္ပာယ်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အဆိုပါ Pebble အချိန်အနက်ရောင်နဲ့ရရှိနိုင်, အဖြူနှင့်အနီ, ကုန်ကျ $199 (£ 130) - တစ်ဦး stainless-သံမဏိဗားရှင်းနောက်ပိုင်းရက်စွဲမှာပိုပြီးကုန်ကျမည်. တစ်ဦးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အဘို့, Apple ရဲ့စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုတက်£ 300 ကုန်ကျနှင့်, Android Wear နာရီ£ 100 နဲ့တက်မှကုန်ကျစဉ်.
အဆိုပါဘက်ထရီသက်တမ်းစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအမြဲ-On screen ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဖတ်ရန်လွယ်ကူသည်. ၎င်း၏ဂီတထိန်းချုပ်မှုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့နှင့်၎င်း၏ app ကိုဂေဟစနစ်ကြွယ်ဝသောများမှာ.
အဆိုပါအချိန်နေဆဲအချိန်ပြောပြနေစဉ်တွင်ရိုးရိုးရေးကြီးခွင်ကျယ်လုပ်ခဲ့၏နိမ့်ဆုံးနှင့်အတူအကြောင်းကြားစာများလာပြီများအတွက် iPhone အတွက်ရရှိနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးလက်ပတ်နာရီသည်, စမတ်နာရီလုပ်ဖို့မွေးဖွားခဲ့အဘယျသို့သောဖြစ်ပါသည်.
သေးငယ်တဲ့ - ဒါဟာလည်းရရှိနိုင်ဆုံးဥာဏ်ပညာစမတ်နာရီ၏တဦးတည်းရဲ့, သတိမပြုမိတတ်ကြောင်းမှေးမှိန်ပုံစံနှင့်အတူ, နောက်တဖန်တစ် Casio တူ. ဒါကလူတိုငျးအတှကျမညျမဟုတျ, ဒါပေမဲ့စံကြိုးရှိခြင်းကြောင့် customize ဖို့လွယ်ကူင်ဆိုလိုသည်, နှင့်ကုန်ကျ $199 ဘဏ်အဲဒီလိုလုပ်ခြင်းအားကိုချိုးဖျက်မည်မဟုတ်.
အဆိုပါ Pebble 9.5mm အထူ, ဒါပေမဲ့အနည်းငယ်လက်ကောက်ဝတ်ပေါ်အငြိမ့် fit မှကွေးနေသည်. ဓါတ်ပုံ: ဂါးဒီးယန်းအဘို့အရှမွေလသည် Gibbs
အကောင်းအဆိုး: Long ကဘက်ထရီသက်တမ်း, အမြဲ-On screen ကိုဖတ်လို့ရအောင်တိုက်ရိုက်အလငျး၌သို့မဟုတ်မှောင်မိုက်၌, ပေါ့ပါးတဲ့, 30 မှရေစိုခံ, အသုံးပြုမှုအားရိုးရှင်းတဲ့, အလွန်ကြီးစွာသောဂီတထိန်းချုပ်မှု.
Cons: မက်ဆေ့ခ်ျမှ reply မှမရှိပါလမ်း, ဖန်သားပြင်သေးငယ်သည်နှင့်အချို့သောသကဲ့သို့ကောင်းသောမကြည့်ပါဘူး, Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အဖြစ်မကောငျးကို iOS သို့ဆက်ဆံမှု.
• ဘယ်၏အကောင်းဆုံးစမတ်နာရီခဲ့သည် 2014?
• Apple ကစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: ရှုပ်ထွေးဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုလုယူလှပသောဟာ့ဒ်ဝဲ
• Motorola က Moto 360 ပြန်လည်သုံးသပ်မှု: ဆငျးရဲဘက်ထရီသက်တမ်းအားဖြင့်လုယူလှပသောစမတ်နာရီ
• LG က G စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ R ကိုပြန်လည်သုံးသပ်: chunky, ပုလ္လိင်, မြန်ဆန်
• Asus က ZenWatch ပြန်လည်သုံးသပ်: တစ်ဦးခေတ်မီ-ရှာဖွေနေက Android စမတ်နာရီ
ပန်းသီး, အပိုဒ်, IOS ကို, iPhone ကို, ပြန်လည်ဆန်းစစ်ချက်များ, ရှမွေလသည် Gibbs, စမတ်နာရီ, နည်းပညာ, ဝတ်ဆင်ကနည်းပညာ
← ထို cyborgs ၏အရုဏ်: လူသားမြားတပါးသောဘုရားတို့ကိုသို့မိမိကိုယ်ကိုလှည့်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို အင်္ဂါဂြိုဟ်တစ်ခုမှာအနီရောင်ဂြိုဟ်ကိုလိုနီနိုင်သလား? →